Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Abu Dhabi dia nanambara ny lisitry ny toeran 'Green List' nohavaozina
Ny fampidirana ao anaty lisitra dia iharan'ny fepetra henjana momba ny fahasalamana sy ny fiarovana mba hiantohana ny fiadanan'ny fiarahamonina UAE
Ny departemantan'ny kolotsaina sy ny fizahantany - Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) dia namoaka ny lisitr'ireo toeran 'Green List' nohavaozina. Ireo mpandeha tonga avy any amin'ireto toerana itodiana ireto dia ho afa-maina amin'ireo fepetra fanakanana tsy maintsy averina rehefa avy tonga any Abu Dhabi ary tsy maintsy hiatrika fitiliana PCR rehefa tonga ao amin'ny seranam-piaramanidina Abu Dhabi.
Ireo firenena, faritra ary faritany tafiditra ao anatin'ny 'Green List' dia havaozina matetika mifototra amin'ny fampandrosoana iraisam-pirenena. Ny fampidirana ao anaty lisitra dia iharan'ny fepetra henjana momba ny fahasalamana sy ny fiarovana mba hiantohana ny fiadanan'ny fiarahamonina UAE. Mihatra ihany koa ny lisitra amin'ireo firenena tonga amin'ny fiaingan'ny mpandeha fa tsy mizaka ny zom-pirenena.
Nohavaozina taminy DCT Abu Dhabi 'Lisitra Maitso' hatramin'ny 26 Janoary 2021:
Netherlands, Fanjakana may noho ny COVID19